आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…… – SUDUR MEDIA
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……
April 19, 2021 AdminLeaveaComment on आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……
नयाँ साल २०७८ वैशाख लागेयता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढेको छ । यसरी आज वैशाख ६ गते सोमबारको दिन सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
आजको दिनमा छापावाला सुन प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांकले देखाएको छ भने तेजाबी सुन प्रतितोला ९० हजार ५०० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । अघिल्लो कारोबार दिन हिजो पनि सुनको मूल्य तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार ७०० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
चाँदीको भाउ भने लगातार दोश्रो दिन स्थिर रहेको छ । महासंघले जनाए अनुसार सोमबार पनि चाँदी प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ ।
यो पनि हेर्नुहोस्:कोरोना कहर: वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द ! महालक्ष्मी नगरपालिकाका सबै विद्यालय आजदेखि यही वैशाख मसान्तसम्म बन्द गरिएका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो चरण बढ्दै जाँदा विशेष गरी बालबालिकामा सङ्क्रमण बढ्दो गतिमा देखिएकाले यही वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गरिएको हो ।
बेहुलीलाई कुरेर बस्नु भनेका किशोरद्वारा आ.त्मह.त्याको प्रयास, साथिले पुर्याए अस्पताल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)